Ummanni Oromoo Mana Lubummaa Oromiyaa bira dhaabbachuu qaba! – Awash Times
Ummanni Oromoo Mana Lubummaa Oromiyaa bira dhaabbachuu qaba!
February 21, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Phaaphaasonni mana amntii Ortodoksii Toophiyaa kan Amaara ta’an walgahanii koree Mana Lubummaa Oromiyaa irratti murtii dabarsan. Aangoo amantii isaanii irratti gaafii kaasan. Dubbiin kuni dubbii amantii seetanii warri calliftan dogoggora. Amantii waliif kabajuun akkuma jirutti ta’ee garuu dubbichi dubbii amantii qofa miti.
sababiin dubbiin kuni dubbii amantii qofa hintaanef, ummanni Oromoo waggoota 150 oliif afaan, aadaa fi seenaa isaa dhabee kan aadaf afaan alagaa irratti fe’amu caalaa, lafaaf qabeenya isaa qeesota waraana nafxanyaa qabatanii dhufan kanaan saamama ture. Gaafin Mana Lubummaa Oromiyaa gaafii mirga ummata Oromooti.
Kunis afaan keenya, aadaa keenyan lafa keenyarratti akka nuuf ta’utti amantii kanatti bulla gaafii jedhu.
Ummanni Oromoo gaafii Qasiis Balaayif waa’iloota isaa gaafii mirga Oromummaa ta’uu beekee koree kana bira dhaabbachuu qaba. Daangaa amantii ceenee harka isaan qabnee mirga Oromummaa isaan kaasan kana deeggaruu qabna.
Osoo seerri Tophiyaa keessa jiraatee sila Phaaphaasonni Amaaraa kuni yakka saba keenyarratti waggota 150 godhan kanaaf itti gaafatamu ture. Ammas taanan gaafa tokko yakka saba Oromootirratti hojjetan kanaaf itti gaafatamu. Yaa Oromoo jaarraa 21ssoo keessattillee wanni ummata keenya irratti jaarra 18ssoo keessa gahe nurra yoo gahu amantii kiyyaa miti jennee waan callisnuu mitii beekaa, wal bira haa dhaabannu!
Previous Post: Election 2020 ahead – the situation in Ethiopia
Next Post: የኦሮሚያ ቤተ ክህነት መሪዎችን ማውገዝ ኣግባብነት የለውም